BANYERE US - ego na mkpọ Co., Ltd.
Mwube ke 2004, Anyị na-e ịrara onwe ya nye a dịgasị iche iche nke onyinye ya ahịa. ịbụ onye ọrụ lapel mkpọ, metal ego, Eriri Ngakọ Igodo, belt buckles, kọflịnks factory n'ihi na ihe karịrị afọ 15, anyị ozi bụ inye ndị kasị oké ọnụ ahịa na ngwaahịa na ahịa anyị, ọ bụghị naanị na price kamakwa àgwà.
Anyị na-atụle àgwà dị ka mbụ ná ndụ anyị, ihe niile na ngwaahịa na-wee nzọụkwụ site nzọụkwụ n'ime anyị ike àgwà akara.
All ahịa 'iwu na-abụghị nanị àgwà obi ike ma na-nnọọ nchebe.
Anyị àgwà akara ngalaba bụ ike anyị, ha na-jisiri-elekọta ọ bụla nzọụkwụ dum usoro iji jide n'aka na àgwà dị ka nke ọma dị ka ibu.
Na a ahuhu na ihe anyị na-eme, anyị mkpara dị njikere inye ndị kasị mma ahịa ọrụ gị! Anyị na-enwe sales ndị mmadụ na-arụ ọrụ ụbọchị ma ọ bụ n'abalị iji hụ ahịa na ebe dị iche nwere ike na-a ngwa ngwa ma ọ bụrụ na e kwuru na-mkpa.
Kpọtụrụ anyị ugbu a ka malitere!